"Magaalada tijaabada ah" taas oo soocelin doonta magaaladii muddada dheer la sugayay ee Mars | Saadaasha Shabakadda
Mashruuca himilada leh "Terraform" Mars, oo loo beddelayo meeraha casaanka mid la mid ah kuweenna, waxay sii wadaa kor u qaadista mashaariicda, fikradaha iyo qorshooyinka si ay suurtogal u noqoto Mid ka mid ah tijaabooyinkii ugu dambeeyay ee la qaado ayaa ah magaalada Dubai, oo ka mid ah toddobada dowladood ee Imaaraadka Carabta. Mashruucan oo masuulka ka ah «Maxamed Bin Rashid Space Center« looga golleeyahay in laga dhigo magaalo ka shaqeysa jawiga Martian.
cunt maalgalinta 140 milyan oo doolar, Mashruucu wuxuu alifay "Mars Science City", wuxuu fadhiisan doonaa 176 kun oo mitir murabac ah. Dhexdooda ayaa laga dhisi doonaa magaalada cusub oo dadku ku tababaran doonaan ka hor intaanay u safrin meeraha aan la jecleyn Sugitaanka imaatinka meeraha Mars waa qodob muhiim u ah gumeysigiisa xiga, si loo hubiyo badbaadada dadka ugu horreeya ee imanaya. Ma jeceshahay inaad ogaato sida aad u rabto inaad u dhisto magaaladan cusub? Waxaan sharaxeynaa faahfaahinta
Wuxuu ku dhashay fikrad ahaan, wuxuu u dhashay si dhab ah
Fikradda aasaasiga ah ee ku wareegsan mashruucan oo dhan, waa jilitaan dhab ah oo ku saabsan waxa lagu sameyn lahaa Mars. Si tan loo sameeyo, waxaan ka bilaabaynaa xaaladaha ugu la midka ah ee dadku la kulmi doonaan. Daraasad ku saabsan gumeysiga Mars ayaa sidoo kale lagu sameyn doonaa halkaas. Hada malaha taariikh bilow ah, laakiin waxa bilowga bilowga ah waa taas "cirbixiyeennada" halkaas ayey ku sii noolaanayaan sannad.
Shaqooyinka ay qaban doonaan waxaa ka mid ah in la hirgeliyo farsamooyinka beeraha, keydinta cuntada, soo saarida tamarta, biyaha la cabbo, iyo sidoo kale daaweynta ku xigta ee kuwani Magaalada sidoo kale waxaa ilaalin doona domes ka hortagi kara soo gelitaanka shucaaca qoraxda. Iyo qaar badan oo ka mid ah qaabdhismeedka, oo laga sameeyay daabacadaha 3D, farsamo ku taal Dubai ay ku samaysay si aad u xusid mudan.
Waqtigaan la joogo, mashruucan himilada leh wuxuu la macno noqon lahaa talaabo weyn oo loo qaaday qabsashada meeraha cas. Haddiise ay dhacdo in qof kastaaba xiise u qabo ama u safri karo aagga, waxaa la qorsheynayaa matxaf u furan dadweynaha!
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » "Magaalada tijaabada ah" taas oo ku celcelin doonta magaaladii muddada dheer la sugayay ee Mars